Mathpix, gadzirisa equations neako iPhone kamera | IPhone nhau
Uyu mubvunzo ndewevaya vanoona Iyo Big Bang Dzidziso: unoyeuka here iyo episode umo ivo vana protagonists vanofunga kugadzira chishandiso? Kune avo vasina kuona chiitiko ichocho, Sheldon, Leonard, Rajesh naWoward vari kufunga kupfuma nekutangisa chishandiso che smartphone. Pfungwa yavanayo ndeyekugadzira application inokwanisa verenga uye gadzirisa chero masvomhu equation. Zvakanaka iko kunyorera kunowanikwa uye zita racho nderekuti Mathpix.
Mashandiro anoita Mathpix haagoni kuve nyore: zvese zvatinofanirwa kuita kuita mufananidzo kune equation uye iko kunyorera kuchaita zvimwe zvese. Kana iwe uchida kuyedza, unogona kuzviita nekutora pikicha yenyaya inotevera (ehe, kuwedzera mufananidzo webrowser): 6 + x = 9 Inokupa iwe 3 here? Asi, sezvaungaona mumifananidzo yeApp Store, ichi chishandiso hachigadzirise chete equation (kana zvisiri, zvaisazodiwa), asi inogona kugadzirisa zvimwe zvakanyanya kuomarara.
Mathpix ichagadzirisa zviyero kwauri
Iyo interface inoyeuchidza zvikuru iyo UI yemashandisirwo akasiyana isu atinoshandisa kuongorora magwaro. Nenzira imwecheteyo nemhando iyi yekushandisa, kuti Mathpix igone kugadzirisa equation isu tichafanirwa kuisa chete fomula / equation mubhokisi. Kana chimwe chinhu chikapinda, kunyangwe chingave chidiki sei, iko kunyorera kuchayedza kuverenga zvimwe zviratidzo uye kutipa mhedzisiro isiriyo. Asi kana tikazviita nemazvo, kuverenga uye mhedzisiro zvinotora mashoma mashoma masekondi.
Mathpix yaifungidzirwa nemudzidzi weStanford PhD Nico Jimenez, ndiani kurairwa neakapedza kudzidza kuyunivhesiti imwechete Paul Ferrell. Vamwe vanogadzira of application ivo vadzidzi vechikoro chesekondari Michael Lee naAugust Trollbäck. Mhedzisiro yacho inonakidza pachikumbiro icho chinoti ndicho chekutanga kuona nekugadzirisa matambudziko akanyorwa nemaoko. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti, kusiyana nema protagonists ezvambotaurwa, iyi application ndeye mahara. Kana iwe wakambozviedza, iwe unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mathpix, gadzirisa equations neako iPhone kamera
Kune zvakare Photomath
Miniclip inodzokera kukakavara neHockey Stars, isu tinokuratidza